ITSHATHI YOBUNGAKANANI BERINGI: FUMANA UBUNGAKANANI BERINGI YAKHO NGEVIDIYO YOKUFUNDISA - UTHETHATHETHWANO
Eyona Uthethathethwano Itshathi Yobungakanani Bendandatho: Indlela yokulinganisa ubungakanani beRingi
Itshathi Yobungakanani Bendandatho: Indlela yokulinganisa ubungakanani beRingi
Awazi ukuba ubulinganisa njani ubungakanani bendandatho? Sebenzisa itshathi yethu yesayizi yobungakanani kwaye ufumane iingcebiso malunga nendlela yokulinganisa ubungakanani beringi yeeringi zokuzibandakanya, amakhonkco omtshato kunye neeringi zesithembiso.
UCarrie Anton ngumbhali onamava omsebenzisi kunye neqhinga lokuqukethwe.
UCarrie waseka uMmangaliso: I-Idea Studio, indawo yokucebisa eMadison, eWisconsin.
UCarrie ngaphambili wayesebenza njengoMhleli weNcwadi kunye noMlobi weWebhu wentombazana yaseMelika.
Ukuhlaziywa kwe-Dec 17, 2020
Amakhonkco omtshato kudala atshintshaniswa njengophawu lothando, imbeko kunye nokuzinikela. Isangqa setyhula asinasiqalo okanye isiphelo, esingumfuziselo womanyano olungunaphakade. Kwaye kuthiwa kulinxitywa ngasekhohlo kuvela kwinkolelo yamaYiputa amandulo yokuba umthambo womnwe wesine udibana ngqo nentliziyo.
Ngentsingiselo etyebileyo kunye nesimboli, amakhonkco okuzibandakanya ayilelwe ukuhlala ubomi bonke. Kuba uqikelelo olulungileyo lokuba ucwangcisa ukuba kunye ngonaphakade, kuyavakala ukuba ubungakanani bendandatho yakho bukhona.
indlela yokucela abahlobo ukuba babe ngumtshakazi
Ukuqonda ubungakanani beRingi
Indlela yokulinganisa ubungakanani beRing FAQ
Indlela yokulinganisa ubungakanani beRingi eKhaya: Itshathi
I-Ring Sizer eprintiweyo
Iingcebiso zeSandi seJewler
Indlela yokulinganisa ubungakanani beRingi ngaphandle kweQabane lakho Ukwazi
Xa kufikwa kumakhonkco okubandakanya kunye nemisesane yomtshato, inye into eqinisekileyo: ubungakanani bemicimbi. Ubungakanani bendandatho emiselweyo banikezelwa ngeemilimitha ngokusekwe kumjikelezo wangaphakathi wesangqa. Njengempahla, imisesane ilinganisiwe kwisikali esisezantsi ukuze ubungakanani bomfazi obufanayo bube bobufana nobezacholo. Ngale nto ithethwayo, ukuba wakhe wathenga iijini ezivela kwiimpawu ezahlukeneyo, uyazi kakuhle ukuba ubungakanani bempahla engu-6 ayisoloko ilingana ngendlela efanayo-kwaye ayifani nemisesane.
Ubungakanani beeringi buya buba nzima ngakumbi xa unika umahluko wengingqi. I-US ne Canada balandela isikali senani kunye nesiqingatha kunye nobukhulu bekota; Nangona kunjalo, amanye amazwe anokulandela isikali soonobumba, esisebenzisa kuphela ubungakanani obupheleleyo okanye kubandakanya uhlengahlengiso lomjikelezo osetiweyo. Kukho ukuphambuka kweetshathi zesayizi yamakhonkco phakathi kwejewelers ngaphandle kwendawo. 'Zonke iigugu zejewellery zehlabathi zihamba ngeendlela ezimbini zobungakanani,' utshilo uDavid Ryan Pomije, isiseko kunye nomphathi we-Bijouxx Jewels. 'I-metric inento yokwenza nokuqala kobungakanani bendandatho yakho-nokuba kusecaleni lecala lesangqa okanye kumbindi wangaphakathi wesangqa. Kuxhomekeke kwinkampani yobucwebecwebe ukuba ithathe isigqibo sokuba yeyiphi imilinganiselo abayifunayo. '
Kwaye ukongeza isikrufu esinye kwisilinganisi somsesane, isitayile kufuneka siqwalaselwe. 'Olunye uyilo, njengalezo zinedayimane kuyo yonke indawo, alunakulinganiswa emva kokuba luyilelwe kuba luya kolula isinyithi esibambe amatye endaweni, lubangele ukuba baphume, utshilo uEmily Duke, umlawuli wezobugcisa kunye nomcebisi woyilo DiamondEnvy.com.
Yiba kukuFota okuKhanyayo
Phambi kokuntywila kwisikhokelo esisinzulu sesikhokelo, sidwelise eminye imibuzo ebuzwa rhoqo malunga nendlela yokulinganisa ubungakanani bendandatho yakho.
Yintoni endiyidingayo ukulinganisa ubungakanani bendandatho yam?
Kuxhomekeka ekubeni yeyiphi indlela ofuna ukuzama ngayo. Ungathenga iseti ye-mandrel okanye uprinte itshathi yesayizi yokulinganisa ukulinganisa iringi esele ikulungele. Ukuba awunayo iringi yokulinganisa ngokuchasene nayo, sebenzisa umtya ukulinganisa umnwe wakho uze uyithelekise kwisikhokelo sakho esishicilelweyo sesayizi yesandi.
Ndingabuchaza njani ubungakanani bendandatho yam eringini?
Zininzi iindlela zokufumana ubungakanani bendandatho yakho ukuba sele unayo iringi ekulingana kakuhle. Yizisa kwijeeler ukulinganisa okanye ukutyibilika iringi kwi-mandrel ukumisela ubungakanani. Unokuthelekisa isangqa sakho kwitshathi eprintiweyo yesayizi yesangqa, apho ufumana ubungakanani besangqa esilingana kakuhle nomsesane wakho.
Ndimele ndenze ntoni xa ndiphakathi kobukhulu bendandatho?
Xa ungathandabuzeki, nyuka ubungakanani. Kulula kakhulu ukwenza ubungakanani kwakhona bendandatho ukuyenza incinci kunenye indlela ejikeleze. Ubungakanani obuphezulu kunokuba ngcono ukuba uhlala kwindawo efudumeleyo njengoko ubushushu bunokubangela ukuba iminwe yakho idumbe.
Ngaba ndingafumana ubungakanani bomsesane weqabane lam ngaphandle kwabo bazi?
Ewe! Ukuba unokufumana izandla okwexeshana kwisangqa esele silungele iqabane lakho, ungasebenzisa ezi ngcebiso zikhankanywe apha ngasentla ukumisela ubungakanani. Ukuba usepinkini, ungasoloko ushenxisa umsesane emnweni wakho kwaye ubone ukuba ulunge phi na emva koko udibane nejeeler. Ngenye indlela, buza kubahlobo beqabane lakho okanye amalungu osapho ukuba bayabazi ubungakanani obuchanekileyo.
Funda ukuze ufumane ezinye iinkcukacha ngendlela yokulinganisa ubungakanani beringi yakho.
Ukulinganisa ubungakanani beRingi, yiya kuMthombo
Awazi ukuba ubulinganisa njani ubungakanani bendandatho kunye nokucinga kunokuba lula ukutsiba iringi kwaye ukhethe i-tattoo yomnwe osisigxina? Musa ukukhathazeka! Kukho iintlobo ngeentlobo zesayizi yeringi, iitshathi zobungakanani bendandatho kunye nezinye izixhobo zokulinganisa ubungakanani bendandatho yakho ekhaya. Kodwa eyona ndlela ilula yokulinganisa ubungakanani kukutsiba itshathi yobungakanani bentsimbi kwaye uye ngqo kumthombo-othengisa izinto.
'Ezivenkileni, iivenkile ezimbeje zisebenzisa i-mandrel -i-wand yentsimbi ephumeleleyo enamanqaku amakhulukazi - ukumisela ubungakanani bomsesane,' utshilo uDuke. 'Sityibilika nje iringi kwaye naphi na apho ime khona isixelela ubungakanani bayo.' Ngokusebenza ngokuthe ngqo kunye nejeeler, awuyi kuba nexhala malunga neetshathi zobukhulu bendandatho okanye iindlela zokulinganisa, njengoko baya kulinganisa besebenzisa naziphi na iinkcukacha ezizodwa abazifunayo.
inqanawa yenqanawa eluphahleni
Ukuba indlela yomntu ngaphakathi ayizukusebenza ngokufanelekileyo, cinga ngokuthenga iseti yakho ye-mandrel okanye iringi yeplastiki oyisebenzisileyo ekhaya ngelixa ulandela itshathi yobungakanani bendandatho. Ngelixa ukukhulisa ubucwebe buchanekile ngokuchanekileyo, ukuthenga iringi esilinganisweni kwi-intanethi kunokuba lula ngakumbi kwaye kuya kukubuyisela umva imali encinci, utshilo uMonil Kathari, umseki we UAntandre .
Ukuba iseti ye-mandrel kunye nesazinge seplastikhi kubonakala ngathi kungaphezulu, zama isazisi eprintiweyo, umsesane wephepha okanye uvavanyo lomtya, usebenzisa itshathi yesazinge engezantsi.
Le ndlela yobungakanani bendandatho isekwe kubungakanani bemilinganiselo yangaphakathi yesangqa esilingana nomnwe wesine wesandla sasekhohlo.
Phrinta itshathi yesayizi yobungakanani. Ukuqinisekisa ukuba iprintwe kubungakanani bokwenyani, khetha 'iSikali 100' xa ukhetha ukhetho lwakho lokuprinta.
Beka isangqa phezu kwezangqa, beka imigca yangaphakathi yesangqa kwisangqa esifanelana kakuhle kwitshathi yobukhulu bendandatho. Ukuba iringi iphakathi kweesayizi ezimbini, khetha ubungakanani bendandatho enkulu.
Ubungakanani bePhepha eliPrintwayo lePhepha
Le ndlela yobungakanani bendandatho isebenzisa indlela yokulinganisa iteyiphu eneemilinganiselo ezithile zeringi.
Phrinta ubungakanani bendandatho, uqiniseke ukuba iprintwe kubungakanani boqobo.
Sika umsesane wesangqa kwaye uvule islot apho iphawulwe khona.
Xa amanani ejonge ngaphandle, tyibilika incam yesilinganisi sesangqa kwislot.
Beka ubungakanani kumnwe wakho womsesane kwaye ucofe ngononophelo ukuze ufunde ubungakanani bomnwe.
Umtya weRingi yeSizer
Le ndlela yobungakanani bendandatho ibonelela ngesixhobo sokulinganisa esicaba ukuba sisetyenziswe ngesiqwenga somtya.
Phrinta itshathi yobungakanani bendandatho, uqiniseke ukuba iprintwe kubungakanani bayo.
Songela isiqwenga somtya kumnwe wakho womnwe kwaye usike kwindawo apho isiphelo sidlula khona.
Qhawula umtya phezulu kunye nesikhokelo sobungakanani bomsesane obonelelwe kwitshathi yobungakanani bendandatho. Eyona ifanelana kakuhle bubungakanani bendandatho yakho. Ukuba iringi iphakathi kweesayizi ezimbini, khetha ubungakanani bendandatho enkulu.
Ngelixa nganye kwezi ndlela zobungakanani bendandatho zikhawuleza, zilungele kwaye zisimahla, kunokubakho ukungangqinelani kokuchaneka ngenxa yezinto ezinje ngoseto lomshicileli okanye ukolula umtya. Cinga ukusebenzisa ngaphezulu kwesayizi enye yendlela yokulinganisa umlinganiso 'wokulinganisa kabini, sika kanye' indlela yokulinganisa ubungakanani. Njalo sebenzisa naziphi na izixhobo okanye ulandele naziphi na iingcebiso ezinikezelwe kwiwebhusayithi yejeweler.
UClary Pfeiffer Photography
Zama la maqhinga obungakanani bomsesane wokufumana indawo efanelekileyo.
barn iinkuni ikhitshi siqithi
Yiya ngokulunga. Njengabathengisi bezacholo, sihlala sisithi iringi kufuneka 'iqhubeke ngokulula, iphume nzima, utshilo uDuke. 'Oku kuthetha ukuba ulungile kwaye iringi ilinganiswe ngokufanelekileyo ngomnwe, ukunciphisa umngcipheko welahleko.'
Gcina amaxesha engqondweni. 'Iminwe yakho ithanda ukutshintsha ubungakanani apha enyakeni, ngakumbi ehlotyeni nasebusika, utshilo uKothari. 'Baza kudumba kancinane ngehlobo ukuze bayigcine engqondweni ukuze iringi ingabinakho ukungonwabi ukuyinxiba kwezi nyanga.'
Cinga ububanzi bebhendi. 'Ububanzi bebhendi, iya kulunga ngakumbi, utshilo uDuke, ocebisa ngokunyuka .25 kuye kubukhulu be5.
Fudumeza izandla zakho. Ukuba ungene nje usuka kobandayo okanye ngokwendalo unezandla ezibandayo, uPomije ucebisa ukuba ubafudumeze kwigumbi lobushushu besingisi esichanekileyo.
Yiya enkulu. Ukuba ufumana imilinganiselo emibini yeminwe eyahlukeneyo okanye ufumanisa ukuba iringi oyinxibayo ihlala ilingana ngokwahlukeneyo amaxesha ngamaxesha, uDuke uthi kungcono ukhethe ubungakanani bendandatho enkulu, kwaye, ukuba unako, qhagamshelana nengcali.
Ukucinga ukuba ubulinganisa njani ubungakanani bendandatho ngaphandle kweqabane lakho? Sukuba nexhala! Akunyanzelekanga ukuba usonakalise isindululo sokubuza ngokubuza iqabane lakho ubungakanani beeringi. Fumana umntu ongaphakathi elizweni onokuthi afumane ubungakanani bentsimbi ayinxibayo. Umama, umhlobo osenyongweni kumhlobo wakowenu unokwazi, okanye angasebenza umlingo wabo ukufumanisa ubungakanani beringi yabo ngaphandle kokukrokrela into.
`` Nika ingqalelo ubucwebe asele ebunxibile, '' utshilo uDuke. Ngaba unayo imisesane ayithandayo ehambelana nomnwe wakhe wasekhohlo okanye kwanomnwe ophakathi? Ukuba kunjalo, linda ukuba ayisuse kwaye ayise ngasese kwindawo yokuhombisa. Ukuba uyikhupha kuphela uyokuzilolonga okanye uhlambe kwaye unokufikelela okuncinci kuthotho, thenga ibha yesepha kwaye ucofe iringi ukuze wenze ukungunda. Isacholo sakho kufuneka sikwazi ukusebenzisa ukumakisha ukuchonga ubungakanani bentsimbi echanekileyo. '
Ukuba iqabane lakho lithatha nje amakhonkco abo ukuze bathambise izandla zabo kangangemizuzwana emihlanu, tyibilika iringi kwinzwane yakho kwaye uqaphele ngqo apho ilingana khona nomnwe wakho. Usebenzisa iitshathi ezahlukeneyo zokulinganisa, wena okanye ijeeler kufuneka nikwazi ukuphinda-phinda ukulunga.
Kwaye xa yonke enye into isilele, yiya ngobukhulu bendandatho enkulu; Kulula ukuphinda ubeke ubungakanani kwakhona kwiringi encinci kunokuba kunjalo kwi-gobigger.
Iingcamango ezingama-27 eziBlue Kitchen (Imifanekiso yokuhonjiswa, iPeyinti kunye noYilo lweKhabhinethi)
Umbala oPeyinti oGqibeleleyo wamaBhafu amaNcinane angenazo iiWindows
uyilo Lwegumbi Lokuhlambela
Yonke into ofuna ukuyazi ngaphambi kokuba ubhale umboniso womtshato
Ezi zezona ndawo ziPhambili zokuThenga iZambatho zoMtshato eziNgenaSini
Uchungechunge olutsha lwe-FYI 'uMtshakazi kunye noKhetho' kwi-Matshi: Bukela iTrailer!
'Ukutshata nguMama noTata' iNkulumbuso yeNkulumbuso yokuBuyisa: Abazali badlala indawo
Iimfazwe zeNkwenkwezi ezi-20 ezithandwayo ngoSuku lwakho oluKhulu
I-10 Marquise Engagementment Imisesane Uyakuyithanda
Izimemo ezingama-20 zaMandulo zoNxweme zoLwandle
Imiphezulu yeetafile zewartz emnyama (iingcamango zoyilo)
Iiplani zePhuli zokuDada eziMangalisayo ezingama-33
Ukuhlangula izinja uZeus, Abbey Ukutshata emtshatweni omnandi womngxunya weBull Bull
Ungazihombisa njani izinto zokubala zasekhitshini
Apha ngezantsi kwedesika leMeditera uJoão Franco Uyabandakanyeka
Izambatho zamadoda zomtshato waselwandle
zibiza malini izithembiso
isicakakazi sezibhengezo zesindululo
Ngubani uSophie Turner otshatele kuye
Isiqithi sekhitshi rustic
Ukuqikelelwa kwengubo yomtshato kaMeghan Markle: Abayili beMitshato bayicingele ingubo yakhe njengoko etshata neNkosana uHarry
Ukuhlamba iMarble (Isikhokelo soYilo)
IBlake, iBECCA KUFRIN